Ny fividianana voalohany ny taona 2017 tany Amazon dia natao tao El Ejido (Almería) | Vaovao momba ny gadget
Na dia ao amin'ny vaovao aza tsy ahitantsika afa-tsy ny tatitra miresaka momba ny teraka voalohany tamin'ny taona 2017, dia hifantoka amin'ny antsika manokana isika, satria ny tiantsika dia ny haitao, gadget ary fialamboly. Toa izany no fanaon'ity olom-pirenena ity El Ejido, tanàna iray any amin'ny faritanin'i Almería izay nanapa-kevitra ny ho mpitarika amin'ny fividianana Amazon nandritra ny 2017, izay mpividy voalohany amin'ny taona, ary tsy afaka niandry iray segondra monja izy hahazoana antoka ny fahafinaretana. Izahay dia mieritreritra fa tsy te hatoky an'i Canal Sur handray ny voaloboka ilay zaza ary nanapa-kevitra ny hampiasa ny fotoana hamelomana indray ny toekarena.
Aza miala rahampitso izay azonao atao anio, hoy ity olom-pirenenan'i Almería ity, izay nividy tamin'ny 00:00:29 tamin'ny andro voalohan'ny taona Ilay zavatra nandrasana hatry ny ela? Kodiarana familiana mifanaraka amin'ny PlayStation 4, Satria fito andro fialan-tsasatra sisa tavela ary ity zaza ity dia te hanararaotra azy ireo amin'ny alàlan'ny fanaovana izay tiany indrindra, milalao ny console (eritreretinay).
Saingy tsy izy irery no nifoha maraina, hoy izy Ny Feon'i Almería, olom-pirenenan'i Pontevedra dia nahazo ankamantatra tsy latsaky ny ankolafy 5.000 antsoina hoe "Casas de Campo" tamin'ny 00:00:52, telopolo segondra monja taorian'ny ejidense haingana. Ary ny varahina dia mankamin'ny Andalusianina iray hafa, Sevillian iray izay nividy fantsika 2.000 milimetatra 15 tamin'ny 00:01:12. Tsy fantatray izay maika tokony hananan'ny mpiara-miasa Sevillian antsika raha ny resaka famantsihana zavatra no atao, fa manantena izahay fa hitondra tena tsara i SEUR ary efa nanatitra ny fonosany androany maraina.
Ho an'ny antsipiriany ihany koa lehilahy iray avy any Madrid izay nividy ny lalao kilalao kilasika superpoly amin'ny 23:59:35 manomboka ny 31 desambra tamin'ny taon-dasa, ho an'ny zavatra rehetra dia hisy ny voalohany sy ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fividianana voalohany ny taona 2017 tany Amazon dia natao tao El Ejido (Almería)
Bilaogy tsara. Hahaha. Tsy dia matotra araka ny tokony ho izy, fa ny hehy dia nanaisotra azy ireo hiala amiko.
Samsung hamoaka ny valin'ny fanadihadihana Note 7 amin'ity volana ity